ဘာပဲ ဖွင့်ချင် ဖွင့်ချင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဘာပဲ ဖွင့်ချင် ဖွင့်ချင်
ဘာပဲ ဖွင့်ချင် ဖွင့်ချင်
Posted by etone on Jul 6, 2010 in News | 1 comment
Just got from mail
Mouse ကိုင်ပျင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ပါ
ဘာပဲ ဖွင့်ချင် ဖွင့်ချင် run box က command လေးနဲ့ ဆိုတော့ ပိုမြန်တာပေ့ါ နော်… ။
အဲ့လို လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အဆင့်တွေက သိပ်တော့ မခက်ပါဘူး .. ။
အရင်ဆုံး ကိုယ်ဖွင့်ချင်တဲ့ program ရဲ့ Shorcut ကို Desktop ပေါ် အရင်ရောက်အောင် တင် .. ပြီးရင် copy ပြီး c:\_windows\_system32 ရဲ့ အောက်မှာ paste လုပ် .. ပြီးရင် မိမိ စိတ်ကြိုက် အတိုဆုံး နာမည် တစ်ခုပေးပြီး အဲ့နာမည်ကို run box က ပြန်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ အဲ့ program အလွယ်တကူ စတင် run မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဥပမာ – နေ့ စဉ် အသုံးများနေကျဖြစ်တဲ့ gtalk ဆိုပါစို့ ….
အဲ့ဒါဆို desktop ပေါ်က shortcut ကို copy ယူပြီး system32 ရဲ အောက်မှာ သွားထည့်ပြီး gt လို့ rename ပြောင်းပေးလိုက်ပါ .. အဲ့ဒါဆို Win+R (Run Command) ကနေ gt လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ google talk လေးတစ်ခု လျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့ ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ခု က လူသုံးအများဆုံး Browser ဖြစ်တဲ့ Mozilla Firefox ကိုတော့ run box မှာ firefox လို့ ရိုက်ပြီး ခေါ်နိုင်ပါတယ် ။ Internet Explorer ကိုတော့ iexplore ဆိုပြီးတော့ လည်း ခေါ်နိုင်ပါတယ် ။ Google Chrome နဲ့ တစ်ခြား browser တွေကို တိုတိုနဲ့ မြန်မြန် ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် အထက်ပါအဆင့်တွေ အတိုင်းပြုလုပ်ပြီး google chrome ကို gc လို့ နာမည် ပေးလိုက်ပါ ။ ပြီးရင် run box ကနေ gc လို့ ပြန်ခေါ်လိုက်တာနဲ့Google Chorme Browser ဟာ သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့Desktop ပေါ်မှာ အခန့် သား နေရာယူပြီးသား ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။
မိမိအကြိုက်ဆုံး သီချင်း ၊ နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်း နားထောင်နေကျ သီချင်းဆိုရင်လည်း အထက်ပါ အတိုင်း ပြုလုပ်ပြီး rename ကို အတိုဆုံးပေး ၊ ဥပမာ – 1.mp3 ( သူ့ ကိုတော့ အနောက်က extension ဖြစ်တဲ့ .mp3 ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု ထည့်ပေးရပါတယ် ) ။ ပြီးရင် run box ကနေ 1.mp3 လို့ ပြန်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ မိမိ အနှစ်သက်ဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ်ဟာ နားထဲကို အလွယ်တကူနဲ့ စိတ်ဖျော်ဖြေမှုပေးပါလိမ့်မယ် ။
ကဲ .. အဲ့ဒါဆို ကြိုက်တဲ့ program သာ လာ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး လိုက်ဖွင့်နေစရာ မလိုတော့ပဲ c:\_windows\_system32 အောက်ထဲကို rename ပေးပြီး ထည့်လိုက်တာနဲ့run box ကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ ခေါ်နိုင်ကြပါပြီ ခင်ဗျာ ။ သိပြီးသားဆိုလည်း နောက်မသိသေးတဲ့ လူတွေ အတွက် သည်းခံခွင့်လွှတ်ပြီး ဖတ်ပေးလိုက်ကြပါခင်ဗျာ ။ အဆင်ပြေကြပါစေ ။
Very Useful Tip, Bro! Thanks for your sharing!